पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म के–के गर्‍यो ? (४८ विवरण) « Pahilo News
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म के–के गर्‍यो ? (४८ विवरण)
प्रकाशित मिति : 20 June, 2016 8:51 am
६ असार । भूकम्पपछिको पुनर्निमाणले गति नलिएको भन्दै आलोचित राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले हालसम्म गरेका कामहरुको विवरण उपलब्ध गराएको छ । गत पुस १० गते प्राधिकरण स्थापना भएयता भएका कामहरुका बारेमा पहिलो न्युजलाई प्राप्त उक्त विवरणमा सबै काम समेटिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म गरेका कामहरु
विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण
२०७२ साउन २१ गते नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग भूकम्प पीडित पहिचान गर्न ‘भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगात संकलन गर्ने कार्यक्रम’ गर्ने सम्झौता गरे अनुसार भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्ला गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न ।
७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधनीको सर्भेक्षण गरिएकोमा ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ धरधनीको नाम अनुदान पाउने सूचीमा समावेश । लाभग्राही सम्बन्धी मापदण्डभित्र नपरेकाले १ लाख ८४ हजार २ सय ६४ घरधनीको नाम अनुदान सूचीमा समावेश नभएको ।
ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाका आठवटा वडामा २ हजार ५ सय ६४ घरधनीको सर्भेक्षण सम्पन्न । पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौता भई प्रक्रिया सुरु ।
उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तथा भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा जस्तै हाउसहोल्ड सर्भेक्षण गर्दा समय र खर्च दुवै बढी लाग्ने भएकाले र छिटो सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले भेरिफिकेसन मोडलबाट गर्ने निर्णय कार्यकारी समितिबाट भएको र उपत्यकाभित्र शीघ्र सर्भेक्षण टोली परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था ।
अनुदान सम्झौता तथा निजी आवास पुनर्निर्माण
२०७३ असार ५ गतेसम्म १ लाख ३१ हजार ९ सय ८० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न ।
१ लाख ७१ हजार ६ सय ७७ घरधनीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बैंकमार्फत वितरण गर्न क्षेत्रगत विभाजन गरी बैंकका शाखाहरु तोकिएको । आवश्यकता अनुसार जिल्ला तहमा छलफल र समन्वय गरी परिस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था । बाँकीका लागि क्षेत्रगत विभाजन गरी बैंकहरुको शाखा तोकी एकहप्ताभित्र प्रतिवेदन प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन जिल्ला समन्वय उपसमितिलाई निर्देशन ।
अनुदान रकम वितरणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एसोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियनसन नेपाल तथा नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स एसोसियसनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर । समझदारीपत्र अनुसार प्राधिकरण र क, ख र ग वर्गमा परेका ५८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सम्झौता सम्पन्न ।
४ हजार ९ सय १९ घरधनीकोे पहिलो किस्ता २४ करोड ५९ लाख ५० अनुदान रकम बैंक खातामा जम्मा भएको । रकम जम्मा हुने प्रकृयालाई तीव्र पार्ने गरी कार्य जारी ।
दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा लगायतका जिल्लामा करिव ५ हजार घर पुनर्निर्माणको थालनी भएको जानकारी प्राप्त । भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइसकेको भए प्राविधिक जाँच गरी अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि गत वैशाख १७ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत १२ अर्व ४४ करोड ६८ हजार रुपैयाँ निकासा । आवश्यकता अनुसार क्रमशः थप रकम निकासाको प्रक्रिया जारी ।
प्राधिकरणले विद्युतीय प्रणालीबाट पठाएको सूचनाका आधारमा व्यक्तिको बैंकमा उपस्थिति बिना नै सम्बद्ध लाभग्राहीहरुको नाममा एकमुष्ट खाता खोल्ने व्यवस्था । लाभग्राही घरधनीले सम्झौता फाराम र नागरिकता लिई बैंकमा गएपछि अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ।
भूकम्पबाट सुरक्षित १७ वटा घरका ढाँचा स्वीकृत भएको र प्रकृति तथा संस्कृति सुहाउँदो डिजानइलाई समावेश गरी भाग दुई प्रकाशनको क्रममा । घरधनीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अरु ढाँचाका घर पनि बनाउन सक्ने व्यवस्था । त्यसो गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने व्यवस्था ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा डकर्मी सम्बन्धी तालिम भइरहेको । हालसम्म विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाबाट करिव १० हजार जनालाई डकर्मी÷सिकर्मी सम्बन्धी तालिम ।
सामूहिक आवास निर्माण
वर्षात्को समयमा भूकम्पबाट बिस्थापित हुन पुगेका जनतालाई सुरक्षित बसोबासका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णय अनुसारका संख्यामा स्थायी प्रकृतिका सामुहिक आवास निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत ५० वटा सामूहिक आवास निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएर धादिङमा ५, नुवाकोटमा ३, काभ्रेमा ११, मकवानपुरमा ५, रामेछापमा ३, सिन्धुपाल्चोकमा ४, रसुवामा ४ र सिन्धुलीमा २ वटाको निर्माण कार्य अघि बढाइएको ।
जिल्ला दैवी उद्धार समितिले जग्गा उपलब्ध गराएको आधारमा नेपाली सेनाले भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ३६ वटा सामूहिक आवास निर्माण गर्ने कार्य जारी ।
निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी आएका गुनासो सुनवाइका लागि सहसचिवहरुको नेतृत्वमा दुई वटा संयन्त्र क्रियाशिल ।
गुनासो सुनवाइ र अनुदान सम्झौता प्रक्रियाबारे उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लाका ५३ वटा एफएम रेडियाबाट चार सातादेखि दैनिक सूचना प्रसारण ।
रेडियो नेपालबाट प्रत्येक बुधबार बिहान ७ः२५ बजे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको ‘उठाऔं देशलाई’ भन्ने पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि कतिपय गुनासाहरुलाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था ।
इन्जिनियर र ओभरसियर परिचालन
घर पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सल्लाह र अनुदान सम्झौतामा सहयोग पु¥याउनका लागि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १३ सय ४६ इन्जिनियरलाई नियुक्त गरी तालिम दिई सम्बन्धित गाविस÷नगरपालिकामा परिचालन ।
त्यस्तै ५ सय २१ सब–इन्जिनियर र ५ सय ७५ असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियरलाई सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नियुक्त गरी तालिमसहित सम्बन्धित गाविस÷नगरपालिकामा परिचालन
भाइटिकासम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सुरु ।
स्वयम्भूको अनन्तपुर, भक्तपुरको फसिदेग, हुनमान ढोकाको वंशगोपाल र साँखुको बज्रयोगिनी जस्ता पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य सुरु ।
धरहराको डिजाइनका लागि जेठ २६ गते परामर्शदाता छनौट भई २ महिनाभित्र विस्तृत डिजाइन दिने गरी कार्य अघि बढेको । ‘मेरो धरहरा–म बनाउँछु’ भन्ने अभियान अन्तर्गत रकम संकलन जारी ।
५१ वटा पुरातात्विक आयोजनाहरुको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढी त्यसमध्ये केहीको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको ।
परियोजना स्वीकृति तथा सम्झौता
सरकारले उपलब्ध गराउने आवास अनुदानसँग दोहोरो सुविधा नहुने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा १८ हजार ८ सय १४ वटा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि १५ वटा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाद्वारा पेश गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत ।
गोरखाको लाप्राक गाविसको भौगर्भिक अध्ययन गरी गुप्सीपाखामा स्थानान्तरण गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली संघसँग सम्झौता भई योजना तयारीको प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
प्राधिरकरणद्वारा ३ सय ३७ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा पेश गरिएको परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत ।
गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा पेश गरिएको २९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन निर्माणका लागि स्वीकृत ।
निजी आवास, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणका लागि गैरसरकारी संस्थामार्फत हालसम्म ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त ।
जाइकाको सहयोगमा ललितपुरमा पाँच वटा विद्यालय भवन निर्माण सुरु ।
गोरखामा २८ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु ।
एडीबीको सहयोगमा काभ्रे जिल्लामा ११ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु ।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव गरिए अनुरुप विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ निकासाको क्रममा ।
अनुशिक्षण र निर्देशन
भूकम्प अति प्रभावित ११ वटा जिल्लामा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका सदस्यहरुको नेतृत्वमा सबै गाविस सचिव एवं इन्जिनियरहरुलाई अनुशिक्षण ।
प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा स्थानीय निकायहरुको परिचालन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिका र गाविस सचिवहरुलाई १४ बुँदे निर्देशन । त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण इन्जिनियरहरुलाई कार्यक्षेत्रमा खट्नका लागि कार्य विवरण सहित निर्देशन जारी ।
नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति, २०७२ ।
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्बन्धी निमयवाली, २०७२ ।
निजी आवास अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
रसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
निजी आवास अनुदान एवं पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ ।
पञ्चवर्षीय योजनाको खाका (पोस्ट डिज्यास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क) स्वीकृतिसहित सार्वजनिक ।